SIDA LOO KARIYO HADHUUDHKA KALLUUMEYSIGA KALLUUNKA IYO KALLUUNKA KALE: WAXA AAD U BAAHAN TAHAY INAAD SAMAYSO SI AAD SI SAX AH UGU DIYAARISO ALAABTA SI QANIINYO WANAAGSAN? - KHUDRADDA
Waxay qaniinaan sida ay tahay ama sida loo kariyo hadhuudhka kalluumeysiga kalluunka iyo kalluunka kaleba: waxaan wadaagnaa siraha
Corn - dalbado qashin ah kalluumeysiga kaydka kala duwan. Waxay sharraxaysaa caansaanka qiimaha hoose, helitaanka iyo waxtarka buunshada. Corn wuxuu soo jiidaa kalluunka badankooda leh haraaga qani ah, ur adag iyo dhadhan. Cuntadu waxay isticmaashaa miro ama khudaar cusub, qasacadaysan ama macmal.
Sida loo doorto cunto kariye? U muujinta sirta ee kalluumeysiga guuleysta.
Dalaggu wuxuu ku jiraa kooxo dabiici ah. Dhererka ayaa leh faa'iidooyin kala duwan:
kalluunka sida dhadhanka, dhadhanka iyo midabka;
joogitaanka joogtada ah ee roodhida dukaamada dukaanka;
kalsooni lagu kalsoon yahay;
miiruhu ma bakhtiiyo biyaha;
heerka jilicsanaanta iyo jimicsiga markaad cunto karisid;
waxaa loo oggol yahay in lagu daro dhadhanka miraha (tani waxay hagaajineysaa tayada quudinta kalluunka);
Soo jiidashada hadhuudhka ee kalluunka waxaa sabab u ah ka kooban kiimikada. Dhaqanka dalaggu waxaa ku jira borotiin yaryar iyo carbohydrates badan, oo ka mid ah istaarijin. Mucaaradka dufanka waxaa ku jira asiidh aan qiimo lahayn (wadarta guud aysan ka badnayn 5%). Makhliyad, boqolkiiba sare ee fosfooraska, waa hodan ku ah carotene iyo vitamin E.
Kalluunkee ku haboon?
Ka hor intaadan cunin hadhuudhka qashinka, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid noocyada kalluunka ee ku nool biyaha jirka la doortay. Si loo hubiyo qaniinyada wanaagsan, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo doorashooyinka dhadhanka ee noocyada gaarka ah, maadaama dhammaan kalluunka aysan soo jiidin miro. Jacaylka ugu muhiimsan waa "glutton" ee kaydka - carp. Marka la qabsado, hadhuudhka waxaa loo isticmaali karaa hilib ama bait.
Waxaa ka mid ah kuwa cunnooyinka hadhuudhka ku jira waxaa ka mid ah:
Meelaha biyaha ee aagga dhexe ee waddankeena, carp-ka, dharka cad iyo dharka qallafsan ee cabbirka weyn waxaa lagu qabtaa lakab leh hadhuudh. On webiyada ma quudhsan ee qumbaha iyo dhirta carp. Waxaad sidoo kale ku dhejin kartaa xargaha by fikradda, khariidadda iyo xitaa chub soo daahay.
Sidee loo kariyaa?
Wixii qashinka lagu kariyo waxay qaadanayaan hadhuudh cayriin ama qasacadaysan. Markaad iibsanayso miro ku jirta bangiga, waxaad u baahan tahay inaad doorato oo keliya alaabta tayo sare leh, maadaama ay waxyeellada u keenayso sharafku aysan u oggoleyn in maadada ay ku adkaato jilbaha, iyo in yar yar waxay soo jiidan doontaa ganaax aan la ganaaxi karin.
Waxaan si faahfaahin dheeraad ah u sii sheegi doonaa sida loo diyaariyo quit kalluunka (oo ay ku jiraan caws) laga bilaabo hadhuudhka.
Tani waxay diyaar u tahay hadhuudhka ka soo baxa gasacadaha, muuqaalkiisa gaarka ahi waa qoraalka "macaan" oo ku qoran calaamadda. Faa'iidada qashinka noocan oo kale ah waa la'aanta wax-qabad waqti-gaaban ka hor isticmaalka. Baanku waa in la furaa, geli xawaashka. Wixii xirnaansho badanaa waxay isticmaalaan habka "timo timaadda".
Sidaad u sameysan lahayd hadhuudh macaan:
Dhererka laga bilaabo korriin huruud ah oo qafiif ah oo lagu qooyey biyo. U adkeyso 1 ilaa 3 maalmood.
Buundada bararsan oo biyo ku buuxi, ku rid kuleylka yar iyo karkari muddo 30-60 daqiiqo ah. Ka dib marka ay biyuhu boogaan, ku dar sonkorta ama malab.
Ka qaad dabka, biyaha daadi, ku dar bambo miraha.
Ku adkee bacda 24 saacadood. Inta lagu jiro muddadan, lactic acid ayaa ka soo baxaysa hadhuudhka iyo urta dabeecadda ayaa soo bixi doona.
MUHIIM! Ha cunin hadhuudhka. Ka dhig dheriga dabka waa lagama maarmaan illaa waqtigaas oo ay jilicsan yihiin (waxaad foorarsan kartaa fargeeto). Hadal aan badnayn ayaa ku dhegsanaan doona geeska.
Hadhuudh la goosto
Nidaamka karinta waa in maaddada loo baahan yahay in lagu qooyo biyo kulul ilaa 24 saacadood. Muddadan, hubi inaad baddasho biyaha 2-4 jeer. Dheecaan dheeraadka ahi waa waxtar leh. Waa inay ka buuxsantaa miraha rubac, kadibna ku dar dhadhan ama dhir udgoon (dooran). Miisaanka haray wuxuu ka buuxsamaa biyo karkaraya, si adag u xidh dhererka. Corn wuxuu diyaar u yahay 4 saacadood.
Laga soo bilaabo miro qallalan
Xilliga guud ee diyaarinta noocyadani waxay qaadataa ilaa 4 maalmood. Waa lagama maarmaan in la diyaariyo hadhuudh loo qaniinaayo qaniinyada hore. Qalabka halsano ee saxda ah waxaa ka mid ah tallaabooyinka soo socda:
Macmacaan ku shub biyo diirran oo isku kari ilaa 30-40 daqiiqo. Biyo sii daadi.
Isku kariimiyey galley biyo qabow oo cusub, ku dar 1 tbsp. sonkorta halkii 1 litir oo biyo ah, khamiir qalalan (halkii 1 kg oo ah hadhuudh 10 g oo khamiir ah). Honey waxaa loo isticmaali karaa sida macaan.
Isku qas isku dar ah, ku rid weel dhalada ah.
Ku dar saliid gabbaldayaha - sheyga ayaa ka hortagi doona hawada inuu galo.
Khamiirinta (halsano) waxay sababtaa xaqiiqda ah in bakteeriyada cagaaran ay ka soo baxdo sonkorta, iyo qarsoodiida khamriga iyo acid. Waa mamnuuc in la xiro weelka waqtigan xaadirka ah sababtoo ah qiiqa kaarboon sunta dioxide. Raashinka waa lagama maarmaan si loo baabi'iyo maqaarka sarajooga sare ee miraha. Natiijada, tareenka ayaa noqon doona mid jilicsan, oo nafaqadu waxay si firfircoon uga dhex socdaan biyaha.
Waxaad sidoo kale daawan kartaa fiidiyowga si aad u barato cunto karinta si aad u kariso hadhuudhka qallalan.
Isku-duubayaasha wax-qabad leh
Kuwani waa simulators hadhuudhka hadhuudhka ah. Wixii soo saaridooda waxaa lagu qaadaa caag ah synthetic. Muuqaal ahaan, hadhuudhkani wuxuu u eg yahay weel yar oo leh kiimikooyin soo jiidata kalluunka isla markaana dhaqaajiya qaniinyada. Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka qashinka - suurtogalnimada ah saameyn la isticmaali karo iyo dhaqso badan.
Corn wuxuu ku jiraa dhadhan ama dhareer la'aan. Kiis labaad, kalluumeysiga wuxuu dooranayaa ari-macaan oo loogu talagalay xayawaanka dambe.
Kooxda guntinta dabiiciga ahi waa alaabta shirkadda "Marukyu". Miro noocan oo kale ah ayaa badal u ah guntinta dib loo isticmaali karo. Tilmaamahoodu waa inay ku jajabiyaan balli. Waxyaabaha qalabka jilicsan, ayaa lagu soo saaray baako dareere ah.
Tani waa hadhuudhka qasacadaysan, kaas oo loo diyaariyey sida ku qoran qariidada gaarka ah si loo hagaajiyo qaniinyada. Waxaad ka iibsan kartaa badeecad noocaan ah dukaanka khaaska ah. Kalluunka kalluumeysiga waxaa lagu soo saaraa gasacadaha, macaanku waa cabbirka isku mid ah, laakiin wuxuu ku kala duwan yahay midabka midabka iyo urta.
Waxyaabaha wax soo saarku waxay sidoo kale ka taxaddaraan ilaalinta sharafta hadhuudhka.. Halbeegga sheyga wax lagu daro ee kala duwan si loo kordhiyo nolosha shelf ee miro.
Waa maxay nooca kalluunka oo kale?
Dulucda kordhay ee degganayaasha kaydka ah waxay muujinayaan noocyo caan ah oo la cadeeyay. Kuwani waa "Bonduelle" iyo "Vernet". Kalluumaysatada qibrada leh waxay ku talinayaan in ay soo iibsadaan alaabooyinka noocyada kala duwan ee aan la saarin gasacadaha, laakiin weelasha dhalada (miro fiican ayaa halkan ku yaal).
Kuwa ka mid ah dhoofka dabiiciga ah ayaa ah "Tackle Enterprise". Horumarinta ayaa ballanqaaday in lures uu hayo tayada ka dib 6 saacadood oo biyo ah.
Kuwa ka shaqeeya kalluumeysiga kalluumeysiga ayaa u qalma:
Haddii aad go'aansato inaad qabato carp
Qanjada ayaa si guul leh loogu isticmaali karaa kalluumeysiga xayawaanka iyadoo la adeegsanayo ulaha kalluumeysiga, qalabka raashinka iyo noocyo kala duwan oo loo yaqaan donok. Carp wuxuu jecel yahay huruud ah, galley aad u badan oo kala duwan. Soo iibso cobs ama midho qasacadaysan waxay noqon kartaa suuqa beeraha.
DAREEN! Maqaarada hadhuudhka ah ee la diyaariyay ama miraha qasacadaysan waxay ku kala duwan yihiin qadar yar. Cuntooyinka badanaa waa kuwo caadi ah, miraha qasacaduna waa yar yihiin cabbirka - kalluunka cagaaran iyo kuwa yar yar ee khatarta ah ayaa ku dhufan doona qaniinyada.
Marxaladda koowaad, waxaad u baahan tahay inaad ku darto hadhuudhka birta birta ah, gabi ahaanba ka buuxi biyo oo baxo ilaa 1-3 maalmood. Tani waa wakhtigii bararka miraha. Cuncunku wuxuu kaloo dhacaa 24ka saacadood ee hore.
Calaamadaha halsano - halsano iyo uumiga biyaha ee midabka huruud ah, urta dabeecadda. Xilliga hargabka, maqaarka sare wuxuu kala firdhinayaa, enzymes ka soo baxa dufka oo jilciya oo biyaha geli - hadhuudhku wuxuu noqdaa mid soo jiidasho leh.
Maxaa tallaabooyin ah oo la qaadayo xiga?
Biyaha ku jira miisaanka ayaa ku adkeysanaya.
Corn wuxuu ku shubaa biyo cusub, karkari dabka ilaa 60 daqiiqo.
Ku dar dhadhan - sonkor, malab. Miro la macaan ayaa soo jiidan kara dhirta ka fiican "kuwa cusub".
Qashinka la xiro
Kawaanka xoqida xoqida ayaa ah geedi socod muhiim ah kaas oo guusha guud ee kalluumeysigu ay ku xirantahay.. Waxaa loo ogol yahay in laga dhigo 1 illaa dhowr ah kukuruzin iyadoo ku xiran xaaladaha cimilada, qoto dheer ee kaydka, tayada qaniinyada.
Kalluumeysiga dhoobada, waxaa lagula talinayaa in la isticmaalo jeexan weyn oo caleen ah kaas oo 8-10 hadhuudh la beeray. Marka kalluumeysiga kalluunka, waxaa lagu talinayaa in la isku daro gallayda iyo gooryaanka (maggots). Haddii kalluumaysigu ku dhaco hoos dushiisa, waa lagama maarmaan in la qaato hadhuudh dabiici ah.
Noocyo kala duwan oo isdabajooga hadhuudhka:
Waxaan dhignaa 1 hadhuudh. Dildilaashadu waxay ku haboon yihiin qiyaas yar ama mid dhexdhexaad ah (tirooyinka 16 ilaa 20). Waxaad galin kartaa maqaarka, samaynta boogaha oo dhan ama dhinac ilaa dhexe. Waxaad kaloo xoqin kartaa cidhifyada hadhuudhka. Habka gaarka ah ayaa loo xushay iyada oo ku xiran cabbirka iyo adkeynta hadhuudhka.
Qodobada Noocyada Galleyda. Waxaa lagama maarmaan ah in aan laga beerin xarun, laakiin sarreenka sare.
Haddii uu jiro maqaarku, waxaa wanaagsan in dhirta kaliya ay dhirto - inta badan hadhuudhku waxay sii ahaanayaan bilaash.
Naqshadaynta timaha. Si aad uhesho waxaad u baahan tahay inaad ku dhejisid xarig khafiif ah ama qallalan (oo lagu magacaabo timo). Ugu dambeyntii waa inuu xiraa wareegga. Mucada ayaa lagu duubay cirbad ama matag uxun. In dalool on hadhuudhka galaan line, dhejin gawaarida gaarka ah. Haddii kale, waad qaadan kartaa ciyaarta ama cows.
Si aad u dhisto foorno laga bilaabo maggot iyo hadhuudh, waxaad u baahan tahay inaad gashato 2-3 dirxiga kuxiga, ka dibna 1 xabbadood, ka dibna 1 ama 2 kale dirxiga. Marka aad sameysid "sandwich" oo ah hadhuudh iyo dixirig, waxaad u baahan tahay inaad gashato laba woxog oo waaweyn oo ku yaal jiirarka, 1-2 buundo oo kor ka koreeya. Haddii dixiriggu uu biyaha ku dhex socdo, fursadaha soo jiidashada kalluunka way sii kordhaysaa.
Rooti la kariyey ayaa kari kara kalluunka oo keliya. Cawska ayaa jecel caruurta iyo dadka waaweyn. Fiiri maqaashadayada ku saabsan sida loo karsado caanaha delicious, bislaado iyo badar badan, noocyada Mini iyo Bonduelle; Waxaad baran doontaa inta aad u baahan tahay inaad ku karkarato miro la qalajiyey oo la qaboojiyey oo ku jira digsi, malaayiin, microwave iyo foornada.
Cunnoolaji karinta ee kalluumeysiga dhowr siyaabood. Tani waa diyaargarowga qadarka macaan, dhoobo ama halsano. Sidoo kale, si loo wanaajiyo qaniinyada, xaglaha qibrada leh waxay kugula talinayaan in lagu daro dhadhanka, iyo marka la xoojiyo qadhaadh, samee "sandwiches" oo laga sameeyo hadhuudh iyo dixirig.